जाडो बिदा कसरी बालबालिकासँग रमाइलो गरी विताउने ? | नुवागी
प्राय विद्यालयमा जाडो बिदा शुरु भईसकेको छ र कतिमा जाडोको बिदा हुदैँछ । नेपालमा जाडो बिदा दुई हप्तादेखि एक महिनासम्म आफ्नो विद्यालयको क्यालेण्डर अनुसार दिइन्छ । जाडो बिदा बालबालिको लागि साह्रै खुसीको समय हो तर अभिभावकको लागि दिक्क लाग्ने समय हो । अभिभावक दिक्क लाग्ने कुराहरूमा अफिस जानुपर्छ छोराछोरीलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने, घरमै हुने अभिभावकको लागि पनि दिनभरी छोराछोरीसँग बस्दा धेरै चोटी कराउनु पर्ने (गाली गर्नु पर्ने) र बारम्बार स्कुल कहिलेदेखि लाग्छ भनीरहनु भएको हुन्छ ।
प्राय घरमै हुने अभिभावक र छोराछोरीमा दिनमा हुने वार्तालाव भनेको धेरै टि.भी. हे¥यो बन्द गर, धेरै मोबाइल खेल्यौँ, तिमीले पढेकै छैनौ, अलि अलि किताव र्हेने गर । होमवर्क आएको छ हैन खोई होमवर्क गरेको, तिमी त्यति काम पनि गर्न सक्दैनौ यस्तै यस्तै । बालबालिका पनि आफ्नो अभिभावकले जति सुकै कुरा भनोस् खासै मतलब गर्दैनन् । एकछिन रिसाउँछ, खाना खादैँन, कोही एकैछिन रुन्छ । अभिभावकले खाना खान फकाउँछ फेरि अभिभावक आफ्नै धुनमा र बालबालिका आफ्नै धुनमा । यो दिनभरीमा दुई तिन पटक हुन्छ ।
बालबालिकाले यस्तो लामो बिदालाई फ्रि (पढाई बाहेकको आफूलाई मन लागेको काम कुरा गर्ने) समय भन्ठान्छन् । अहिले बेसी ग्याजेटमा नै बिताउन पाउँ भन्ने योजना बनाएका हुन्छन् । स्कुलले होमवर्क दिएको हुन्छ तर स्कुल लाग्ने अघिल्लो दिन भन्दा अगाडी धेरै बालबालिकाले स्कुलको झोला छोएको हँुदैन । सुत्ने, उठ्ने, खाने समयको साथै आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा पनि खासै ध्यान दिएको हुदैन ।
हामी अभिभावकले बालबालिकाको उमेरलाई ध्यान दिएर उनीहरूले बुझ्ने भाषामा उनीहरूसँगै दिन चर्याको बारेमा योजना ग¥यौ भने यस्तो समस्या कमै आउँछ । बिदालाई धेरै रमाईलोका साथै सिक्ने वातावरणमा बिताउन सकिन्छ । बिदामा बालबलिकासँग बसेर योजना बनाउने, यो जाडो बिदा कसरी बिताउने भनेर कुराकानी गर्ने । कुन दिन ? कति खेर ? कहिले ? के गर्ने भनेर योजना बनाउनु पर्छ । योजना एकदिन मात्र गरेर हुदैन दिनदिनै गर्नुपर्छ । बिदामा पनि बालबालिकाको रुटिनमा ध्यान दिनुपर्छ । प्राय बालबालिका घरमा रुटिन अनुसार नचल्ने हुनाले स्कुल लागेपछि उनीहरू समयमा घरबाट निस्कन, समयमा काम सकाउन एकदमै गाह्रो मान्छन् । त्यही कारणले सकेसम्म सुत्ने, उठ्ने समय एउटै कायम राख्न सके राम्रो हुन्छ ।
बिदामा गर्न सकिने कामहरू ः
१) आजकल अभिभावकको ब्यस्ततालाई ध्यानमा राखि क्याम्पहरू संचालन हुन थालेको छ । बालबालिबालाई क्याम्पमा पठाउन सकिन्छ । बेलुका क्याम्प कस्तो भयो छलफ गर्ने ।
२) बालबालिकाको इच्छा र सोख अनुसार नृत्य, संगीत, खेलकुद कक्षामा पठाउन सकिन्छ ।
३) कतिपय बालबालिकालाई नयाँ नयाँ कुरा खोज गर्ने, सामानहरू बनाउने (innovation, experiment) मा एकदमै चाखलिने हुन्छ । घरमा ती सामानहरू जुटाई दिएर रचनात्मक कार्यहरू गर्न लगाउन सकिन्छ ।
४) बालबालिकालाई art and craft मनपर्छ भने घरमा ती सामानहरू जुटाइदिने ।
५) बालबालिकासँगै किताव पसल घुम्न जाने र बालबालिकाले पढ्न सक्ने किताब किनीदिने । किताब उनीहरू आफैँलाई छान्न लगाउने ।
६) बालबालिकासँग विहान बेलुका केही समय हिड्न तथा साइक्लिङमा जान सकिन्छ । नजिकै ग्राउण्ड छ भने बास्केटबल, ब्याटमिन्टन, फुटवल खेल्ने । जसले बालबालिकालाई फूर्तिलो बनाउँछ ।
७) बिदामा पनि योजना बनाएर नै ग्याजेटको समय दिने ।
८) बेलुका दैनिकी लेख्न लगाउने । सानो बालबालिका तीनदेखि सात वर्षको बालबालिकासँग के के ग¥यो कुराकानी गर्ने । उनीहरूको धेरै कुरा सुन्ने ।
९) होमवर्कलाई बिदा हुने बित्तिकै वा बिदा सकिने १÷२ दिनमा सकाउने भन्दा पनि दैनिक अलि अलि गर्न लगायौ भने अझ राम्रो हुन्छ । बिदामा कतै जादैँ हुनुहुन्छ भने जानुभन्दा अगाडि नै होमवर्क सकाउँदा राम्रो हुन्छ ।
१०) मिलाएर घुम्न जाने ठाँउ र दिन सल्लाह गरेर घुम्न जाने र त्यस ठाउँको वातावरण, सामाजिक जनजिवन, रहनसहन बारे छलफल गर्ने । हिँड्नु स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो भएकोले हाइकिङको पनि योजन गर्न सकिन्छ ।
११) ३ देखि ७/८ वर्षको बालबालिकाले आमाबुबाले गर्नु भएको काममा म पनि गर्छु भनेर अग्रसर हुने गर्दछन् । तर अभिभावकहरूले प्राय तिमी गर्न सक्दैनौ, बिगार्छाै भनेर निरुत्साहित गरेको हुन्छ भने, ९ वर्षदेखि माथिको बालबालिकालाई अब तिमी ठूलो भयौ यति त गरिदेउ भन्दा प्राय नाई उत्तर आउँछ । सबै उमेरका बालबालिका जिम्मेवारी लिन चाहन्छन् । त्यसैले साना बालबालिकालाई सामेल गराएर र माथि उमेर समूहको बालबालिकालाई उनीहरूँग सल्लाह र योजना बनाएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
१२) बालबालिकाले गर्न सक्ने कामहरूमा विहान उठ्ने वित्तिकै आफ्नो डस्ना मिलाउन लगाउने, विरुवामा पानी हाल्ने, सरसफाइ तथा लुगा धुन सहयोग लिने, कौसी वा वारीमा तरकारी रोप्ने तथा त्यसको मलजल गर्न सकिन्छ, किचेनमा सहयोग लिने ।
१३) आजकल व्यस्तताको कारणले गर्दा लामो समयसम्म आफन्तहरूसँग भेटघाट भइराखेको हुँदैन । त्यसैले यस्तो विदामा आफन्तजनसँग भेटघाट गर्न जाने योजना पनि बनाउन सकिन्छ । जसले आफन्तहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न सहयोग गर्छ ।
बिदा बालबालिकाको श्रृजनात्मक, अन्तरनिहीत तथा ब्यवहारीक सिपको विकास गर्ने एउटा सुनौलो अवसर हो ।
सुदेशा स्कुल, नख्खु